Horohorontany mahery vaika indrindra teo amin’ny tantaran’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Horohorontany mahery vaika indrindra teo amin'ny tantaran'i Japana
Voadika ny 11 Marsa 2011 19:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Italiano, Español, polski, বাংলা, 한국어, Deutsch, Português, русский, 繁體中文, 简体中文, عربي, Swahili, English
Ny Zoma 11 martsa 2011 tamin'ny 2:46:23 hariva (ora any an-toerana), horohorontany 8.9 amin'ny maridrefin'ny fihovitry ny tany no namely an'i Japana, horohorontany mahery vaika indrindra teo amin'ny tantaran'i Japana.
Indreto fitaovana an-tserasera sasany izay nampiasan'ny olona hifandraisana sy hanomezana vaovao:
Mpitady olona ao amin'ny Google
Pejin'ny Facebook hizarana vaovao
Lahatsoratr'i Gigazine [ja] ahitana pikan-tsary avy amin'ny efijery (capture d'écran) izay manazava hoe ahoana no atao raha handefa hafatra maika izay napetrak'ireo orinasa mikirakira ny finday mialoha.
Namorona ny tenifototra ny tontolon'ny Twitter Japoney #sendai sy#jishin. #prayforjapan no nampiasaina mba andefasana vavaka any amin'ny tontolon'ny Twitter miteny anglisy.
Olona maro ao amin'ny Twitter no niezaka nitony ary nizara torohevitra, izay nifantoka indrindra tamin'ireo horohorontany efa niainana toy ny Horohorontany Lehibe tao Hanshin na ny Horohorontany tany Chuetsu.
Azafady, Aelezo ny vaovao! Soso-kevitra avy amin'ireo mpahaiherinaratra: raha any amin'ny faritra tapaka jiro ianao dia piho ny “disjoncteur”. Raha miverina ny jiro, alefaso tsirairay ny “disjoncteur kely”. Raha mbola mitohy ny “court-circuit”, aza terena, fa antsoy ny mpahaiherinaratra hanampy anao. Idifio ny afo mety ho vokatry ny tariby mihanjaka (herinaratra).
@take23asn “ahoana no hiarovana ireo olona voatsindrin'ny lalimoara: Ny sisiny efatra, ny ambany, ny ambonin'ilay lalimoara dia vita amin'ny hazo mafy tsara avokoa. Fa ny aoriana kosa vita amin'ny solaitra manify. Araka izany dia dakao ary vakio ny solaitra manify aoriana mba ahafahana manala ny vatasarihana ary sarasaraho mora ilay fanaka.
[Maika] Atsangano ny tanan'ireo izay mila mpandika teny baiko moana azafady . Tsindrio ny http://t.co/KQPhc1r ary jereo ny vaovaon'ny NHK “Henoy amin'ny masonao ny fandaharana ao amin'ny TV.”
Mandefa vaovao momba ny horohorontany ny radio mampiasa fiteny isan-karazany FM wai-wai (simulradio) . Afaka mihaino amin'ny alalan'ny aterineto ianao: http://bit.ly/eaV16I%20 Alefaso ny hafatra ho an'ireo vahiny ao Japana azafady.
Hitsitsy ny mpiteraka angovon'aratra (batterie) ny Iphone 1) Mamono ny wifi 2) Mamono ny GPS 3) Mamono ny fanondroana hotsindrina (push notifications) 4) Mamono Bluetooth 5) Mampihena ny hazavan'ny efijery (écran) 6) Mamono ny fampiharana tsy ilaina.
@Tranquil_Dragon ao Sendai, nandefa ny pikantsary tanefijery (capture d'écran) i Miyagi Prefectiora:
@wanchan11 nandefa sary nalaina tao amin'ny seranan'i Sendai izay dibo-drano:
Horonan-tsary vitsivitsy tany Tokyo:
Fisaorana lehibe ho any ekipan'ny GV (Global Voices) Japana izay nanambatra ny heriny nandritra ny horohorontany mba hiara-hiasa amin'ny fandikana ity lahatsoratra ity.